खाली पेटमा भुलेर पनि नखानुहोस् यी चीजहरु ! - VON TV
१४ पुष २०७६, सोमबार १६:११ 205 ??? ???????
काठमाडौं – हामिले बिहान उठ्ने बित्तकै पानी र चिया पिउछौ । त्यस्तै बिहानै उठ्ने बित्तिकै नास्ता पनि खान्छौ । नास्तामा बिभिन्न खानेकुरा खाने गर्छौ । तर यस्ता खानेकुरा पनि छनु जुन बिहान उठ्ने बित्तकै खालीपेटमा खान बिहिान उठेपछी हाम्रो पेटमाएसिडको मात्रा धेरै हुने गर्छ ।
यस्तो बेला एसिडिटीयुक्त खानेकुरा खाँनु हुदैन । बिहानै खाली पेटमा एसिडिटीयुक्त खानेकुरा खाँदा पाचनशक्तिमा गढबढ आउने गर्छ । बिहानै उठ्ने बित्तकै खाली पेटमा ग्रीन टी वा चिया पिउनु हुदैन । यसमा हुने कैफीन तत्वले गर्दा पेटमा समस्या आउछ । त्यस्तै बिहान उठेपछी गोलभेँडा पनि खानु हुदैन । यसमा पनि अत्याधिक एसिड हुन्छ । यसले एसिडिटीको खतरा बढाउँछ ।
बिहानै उठेपछी सैचुरेटेड र प्रोटिनको मात्रा बढी हुने दुध पनि खानुहुदैन । खाली पेटमा दुध पिउँदा खोकीको समस्या हुनसक्छ । बिहानै उठेपछी दही पनि खानु हुदैन । त्यस्थतै केरा खानु पनि राम्रो होइन् । यसले खाली पेटमा पाचनप्रक्रिया बिगार्छ ।
कोरोनाभाइरस त्रासमा मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा कसरी गर्ने, चिन्ता कसरी हटाउने?
कोरोना भाइरसका कारण १९० राष्ट्र प्रभावित, १६ हजार ४ सय बढीको मृत्यु
“कोरोना लाग्दैमा मरिदैन ” : कोरोना संक्रमित भएर निको भएकी ब्रिजेटको कथा
कोरोना भाइरस : बिद्यालयहरु बन्द भए , अब केटाकेटीहरुलाई कसरी हेरचाह गर्ने ?
कसरी बस्ने होम / सेल्फ क्वारेन्टाइनमा ?
अमेरिकामा कोरोनाविरुद्धको खोपको पहिलो परीक्षण शुरु, ४३ बर्षीया जेनिफर खोप लिने पहिलो व्यक्ति भईन् !